छिटै नआउने भो एसइईको परीक्षाफल !::JaljalaKhabar Online Portal from Nepal
२८ चैत्र २०७५, बिहीबार ०६:५७
काठमाडौं। यो वर्षको एसईई परीक्षाको परीक्षाफल ढिलो हुने सम्भावना भएको छ । कर्मचारीको अभावामा परीक्षाफल प्रकाशित हुन ढिलो हुने भएको हो । २६ जिल्लाका शिक्षा समन्वय समिति प्रमुखको संघ र प्रदेशमा समायोजन भएकोले ती जिल्लामा कस्ले उत्तरपुस्तिका बुझ्ने भन्ने विषयान टुङ्गै लागेको छैन ।
२६ जिल्लाका शिक्षा प्रमुख अभाव हुने भएपछि परीक्षाफल प्रकाशित गर्न समस्या हुने परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । परीक्षा नियन्त्रक विष्णुप्रसाद अधिकारीले कर्मचारी नभएकाले कतिपय जिल्लामा उत्तर पुस्तिका बुझ्नै समस्या भएको जानकारी दिए।
उनले भने–कर्मचारीको चरम अभाव देखिएको छ, कसरी समयमै परीक्षाफल प्रकाशित गर्ने?
२६ जिल्लाका त समायोजनमा परेका छन्, अन्य जिल्लामा समेत कर्मचारी अभाव देखिएको छ–राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष प्राडा चन्द्रमणि पौडेलले भने।
उहाले यही अवस्थामा समयमै परीक्षाफल प्रकाशन गर्न कठिन हुने बताए। ‘यही अवस्था रहिरहे परीक्षाफल प्रकाशित हुने मिति पर सर्नेछ’–परीक्षा नियन्त्रक अधिकारीले भने। गत वर्ष असार ११ मा प्रकाशित भएको परीक्षा करिब एक महिनापछि सर्न सक्ने आंकलन गरीएको छ।
२९ गतेसम्म प्रविधिक विषयमा परीक्षा हुनेछ । प्रदेश २ बाहेक अन्य केन्द्रमा उत्तरपुस्तिका लैजाने तयारी भैरहेको छ । उत्तरपुस्तिका केन्द्रमा पुग्नुअघि डिकोडिङ गरिन्छ । कर्मचारी नहुँदा हालसम डिकोडिङ हुन सकेको छ । बोर्ड र पनिकाले मन्त्रालयलाई परीक्षाफल प्रकाशित गर्नु अघि कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरिसकेको छ । कर्मचारी अभाव भएको विषयमा मन्त्रालयमा लिखित जानकारी गराइसकेका छौ, तर मन्त्रालयले हालसम्म कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन–बोर्डका अध्यक्ष प्राडा पौडेलले भने।
करिब ६५ जना कर्मचारी रहेको पनिकामा हाल २३ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । बोर्डबाट ७ जना कर्मचारी खटाइएको छ । परीक्षाफल प्रकाशित गर्नु अघि गोप्यमा रहने इन्जिनियरको समेत अभाव देखिएको छ । परीक्षा जस्तो सम्बेदनशिल विषयमा काम गर्ने इन्जिनियर समेत करारमा कार्यरत छन्।
चैत १० गतेबाट संचालन भएको यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा(एसइई) मा ४ लाख ७५ हजार ३ जना परीक्षार्थीले परीक्षा दिएका थिए । नेपाल समाचारपत्र दैनिक
एसईई नतिजाः शान्ताको ग्रेड ‘बी’, करिश्माको ‘बी’ प्लस
एसईईको नतिजा प्रकाशन ४ बजे सम्म हुने
एसइईको नतिजा आज सार्वजनिक गर्ने तयारी हुँदैः यसरी हेर्न सकिन्छ नतिजा